Waxaan falanqeyneynaa qalabka dhegaha ee 'Gold Goldless Wireless Stereo Headset' 2.0 [DIB U EEG] | War gadget
Waxaan falanqeyneynaa qalabka dhegaha ee 'Gold Goldless Wireless Stereo Headset' 2.0 [DIB U EEGID]
Marka ay timaado ciyaarta, gaar ahaan haddii aan ka faa'iideysanno astaamaha cayaaraha badan ee ciyaartoy badan, waxaa muhiim ah in aan ku jirno xaalado maqal oo qumman. Taasi waa sababta dadka isticmaala intooda badani maanta u go'aansadaan inay sameeyaan iyada oo aan lahayn nidaamyada hadalka oo ay doortaan dhagaha dhagaha leh oo tayo leh si ay u siiyaan dhammaantood kulamadooda. Si kastaba ha noqotee, markii aan la kulanno nidaamyo sida PlayStation 4, oo leh xaddidaadyo heer ku-xirnaanta wireless ama Bluetooth, waa inaan miisaannaa fursado badan. Maanta waxaan falanqeyneynaa Sony's Gold Wireless Wireless Stereo Headset 2.0, samaacadaha rasmiga ah ee loogu talagalay PlayStation 4 oo noqda mid ka mid ah xulashooyinka ugu wax ku oolka badanHaa, ma ahan kuwo raqiis ah gabi ahaanba.
Waa run inaan ka heli karno samaacadaha dhagaha oo dhan, qiyaastii labaatan yuuro waxaan ka heli doonnaa samaacado noocyo sida Tritton ah oo na siin doona tayo ku filan inaan ku ciyaarno iyo makarafoon ku dhex jira. Si kastaba ha noqotee, waxaan wajahaynaa Headset-ka Dahabka Dahabka ah ee Dahabka ah ee 2.0 oo ku dhowaad afar jeer ka badan kuwii hore, waa maxay sababtu? Waxaan falanqeyneynaa faa'iidooyinka, qasaarooyinka iyo astaamaha ku saabsan sameecadaha dhagaha ee 'Sony', kuwaas oo aan kuu sheegi doono bilowgooda inay nalooga yaabeen. Aynu u aadno halkaas dib-u-eegista, oo haddii aadan dareensanayn inaad wax akhrido, ha seegin fiidiyowgeena.
1 Qaab dhismeedka iyo qalabka wax soo saar
2 Ku habboonaanta isticmaalka iyo gaadiidka
3 Tayada maqalka iyo habeynta
4 Isku xirnaanta iyo adeegsadaha isticmaalaha
5 Mawduuca iyo qiimaha
Qaab dhismeedka iyo qalabka wax soo saar
Marka horeba, wax inagu riyaaqa ayaa ah in markaan ka soo saarno sanduuqa aan la kulanno caag, laga yaabee inay ka adag tahay sida aan qiyaasi karno. Xarka madaxa waxaa laga sameeyaa gebi ahaanba polycarbonate, dhanka kale, gudaha madaxa waxaa laga sameeyaa waxyaabo jilicsan, Sida loo maleynayo isbuunyo, kaas oo sidoo kale lagu daboolay maqaar buluug buluug ah oo buluug ah oo u muuqda inuu u hoggaansamayo qaybta sare ee madaxa.
Marka laga hadlayo samaacadaha dhegaha, qaybta xiriirka kontaroolada, isku xirka lacag bixinta iyo qalabka intiisa kale, waxaa laga sameeyay maado ku dayanaysa caag, kaas oo bixiya dareen xoog leh oo madaxa uu ka maqan yahay iyo inaan hubinno iska caabinta marinka waqtiga taabashada taabashada ka dib taabashada. Wixii ku saabsan isbuunyada dhagaha, halkan iyagu ma aysan rabin inay ku dembaabaan xoqitaanno, waxay na siineysaa suuf weyn oo dammaanad qaadaya raaxada. Suufkani sidoo kale wuxuu ku daboolan yahay maqaar poly ah, oo ah wax aynaan garanaynin sida ay u saameyn doonto waqtiga, laakiin waxay fursad fiican u leedahay inay noqoto cunsurka ugu horreeya ee diir ka baxa haddii aynaan si sax ah ula dhaqmin.
Ku habboonaanta isticmaalka iyo gaadiidka
Marooyinka madaxa waxay leeyihiin nidaam isku laaban oo layaab ku leh sida ugu fudud ee ay ugu dhaqaaqdo. Si fudud adoo ku fulinaya xoog ugu yar mid ka mid ah sameecadaha dhagaha, waxaan ku laaban karnaa samaacadaha dhagaha nafsadooda., marka hore hal dhinac ka dibna dhinaca kale, iyada oo aan lahayn nooc doorbidid ah ama u baahan in lagu qasbo qaybaha caagga ah. Qaybtani waa lagama maarmaan marka la rarayo.
Si looga qaado hal meel oo loo socdo meel kale, Sony waxay aragtay inay ku habboon tahay in lagu daro boorso yar oo microfiber ah taas ayaa noo oggolaan doonta inaan gelino samaacadaha dhagaha hore loo duubay, sidan, waxaan uga soo qaadan karnaa halkaas ilaa halkan annaga oo aan ku xambaari karin iyaga oo laalaada (aad ayey caan u yihiin) ama sanduuqooda.
Sameecadaha dhagaha iyo suufka dhagaha waxaa loogu talagalay in lagu raaxeysto, waxay leeyihiin suuf aad u ballaaran iyo qaab ergonomic ah, tani waxay ka dhigan tahay in daloolka loogu talo galay inaan si buuxda dhegaha u gelino, habkaas ma heli doonno nooc walboo curiya oo cadaadis soo saara. dhegaha. Dhibicdani waa mid u gaar ah dadka isticmaala muraayadaha indhaha, tan iyo markii dhegta la gelinayo Kuma soo saarayso cadaadis macbudyada muraayadaha indhaha waadna ciyaari kartaa saacado badan adigoon ka welwelin dhibaatadan in sameecado badan oo kale ay ka maqan yihiin. Si la mid ah, sameecadaha dhagaha waxbadan iskama adkeeyaan, hase yeeshe, go'doominta guud ee dhegta ayaa ka dhigan in mararka qaarkood aan dareemi karno raaxo la'aan kuleylka awgiis.
Waa qodob tilmaam iyo raaxo leh in makarafoon Uma istaago dhinac kasta, waxaa lagu dhex daray mid ka mid ah sameecadaha, taas oo naga hor istaageysa inaan si fudud u jabinno ama aan dhib ku qabno marka aan ciyaareyno. Xagga ismaamulka, waxay na siin doontaa ilaa siddeed saacadood.
Tayada maqalka iyo habeynta
Waxaan wajahaynaa samaacadaha dhagaha ee qorsheynayay in loo iibiyo 7.1, laakiin sida iska cad ma ahan. Qaar ka mid ah 7.1 sameecadaha dhagaha ayaa ka mid ah taxane yar oo sameecado yar yar ah oo ka dhexdhaxeeya midka weyn, waxaana si dhib leh u helaynaa inaan helno samaacado leh astaamahaas wax kayar laba boqol oo euro. Si kastaba ha noqotee Maxay sameecadaha dhagaha ahi u bixiyaan 7.1 cod markay aad u qiimo yar yihiin? Sababtoo ah Sony waxay ka faa'iideysaneysaa astaamaha iyo codsiyada PlayStation 4 si ay u gaarsiiso dhawaaqa 3D-ga ah ee jilitaanka 7.1. Sidan oo kale, sida ugu dhakhsaha badan ee aad u gashato oo aad u ciyaarto ciyaaro sida Call of Duty, waxaad ogaan doontaa in dhawaqu xad dhaaf yahay, waxaad maqlaysaa raadka, rasaasta iyo dhaqdhaqaaqyada xaglaha oo dhan sidii aad halkaas u joogtay.
Muuqaalkan dhawaaqa «VSS»Ama 3D ayaa luntay isla marka aan isticmaalno samaacadaha dhagaha ka baxsan nidaamka PlaySation 4. Waqtigaas waxay noqonayaan samaacado dhegeystayaal ah oo tayo wanaagsan leh, oo leh xoojin xiiso leh oo ku jirta basaska oo astaamaha ugu muhiimsan, daboolka banaanka uu soo baxo
Si kastaba ha ahaatee, Waxay yihiin dhagaha dhagaha oo si cad diirada loogu saaray ciyaarida iyo ku raaxeysiga ciyaartaHaa, nidaamka 'PlayStation 4'. Way iska cadahay inaad ka heli doonto dhagaha dhagaha leh codka ugu fiican muusikada mobilkaaga qiimahaas, laakiin ma heli doontid wax sameecado sameeya ah oo si isku mid ah u bixinaya astaamaha dhawaaqa PlayStation 4 isla qiimaha, ama kuwa la midka ah .
Muuqaal kale oo muhiim ah ayaa ah barnaamijka PlayStation 4. Isla marka aan isku xirno waxaan marin u heli doonnaa codsi leh daraasiin astaamo ah oo aan ku shubi karno xusuusta dhagaha dhagaha iyadoo la adeegsanayo microUSB. Sidan oo kale, waxaan u qaabeyn karnaa mid ka mid ah labada nooc ee maqalka ee ay sameecadaha dhagaha leeyihiin, ama toogasho, baabuur ama ciyaaro istiraatiijiyad. Muuqaal ay kaliya kaheli karaan dhagaha dhagaha.
Sida for micro, waxay bixisaa cod nadiif ah oo nadiif ah faragelin la'aan, si kastaba ha noqotee, waxaa lagugula talinayaa inaad ka joojiso marka aan kaligeen ciyaareyno, maadaama haddii ay soo saarto hum yar oo xanaaq badan haddii aan ku ciyaareyno heer hoose.
Isku xirnaanta iyo adeegsadaha isticmaalaha
Waa inaan adkeynaa in kastoo aad qiyaasi karto, sameecadaha dhagaha ma haystaan ​​farsamada Bluetooth. Tani waxay dhibaato ku keeni doontaa isku xirka DualShock 4 oo Sony ay ogtahay. Sababtaas awgeed, isku xirka USB-ga waxaa lagu soo daray sameecadaha wax soo saarka gudaha RF, oo waxay noqon doontaa midka si toos ah ugu xirma sameecadaha dhagaha. Looma isticmaalo kaliya PlayStation 4, waxaan ku xirmi karnaa USB-gaan PC-gaaga ama wixii maqal ah waxaanna ka heli doonnaa codka RF-ga dhegeystayaasheena PlayStation 4.
Dhamaan koontaroolada joystick waxay ku yaalliin koobka dhegta bidix. Qaabkan waxaan lahaan doonnaa badhan badhan oo noo ogolaanaya inaan mudnaanta siino inta udhaxeysa codka sheekada ama tan ciyaarta fiidiyowga. Waxyar uun ka hooseeya tan, waxaan ka helnaa qaab beddelaad, waxaan haysannaa "OFF" si aan u damino dhagaha, "1" qaabka caadiga ah iyo "2" qaabkii aan horay ugu soo raray xusuusta dalabka.
Dhinaca kale waxaan ka helaynaa badhanka mugga caadiga ah, oo kaliya ka sarreeya suurtagalnimada in la dhaqaajiyo oo la joojiyo "VSS" 3d cod-bixinta maqalka iyo xagga hoose badhanka "aamusnaan" ee makarafoonka oo noo oggolaan doona inaan si dhakhso leh u aamusno.
Ugu dambeyntii salka ugu hooseeya waxaan leenahay isku xir xirmo ah 3,5mm waayo markii aan ka maqnayn baytari iyo gelitaanka microUSB si loogu buuxiyo batariga iyo macluumaadka nidaamka.
Mawduuca iyo qiimaha
Baakadaha ay Sony ku bixiso dhagaha dhagaha waa kuwo aad u fiican. Markaan fureyno, waxaan marka hore heleynaa samaacadaha dhagaha iyo waxyar oo ka hooseeya sanduuq ay kujiraan waxyaabaha soo socda: Micro USB cable, 3,5mm Jack cable, USB Dongle iyo bac microfiber.
Waxay kuxirantahay halka aan kahelayno dhagaha, qiimaha ayaa ku kala duwanaan kara € 89 iyo € 76, Halkan Waxaan kaaga tagnay xiriiriye 'Amazon' si aad ugu hesho qiimaha ugu fiican.
Waxaan wajaheynaa samaacadaha ugu qiimaha-fiican ee bixiya habeyn buuxda oo loogu talagalay PlayStation 4. Dabcan, ha u raadin wax la qaadi karo ama tayada maqalka ah si aad u baxdo ama u ciyaarto isboortiga, waa headphones diiradda lagu saaray ciyaaraha iyo nidaamka su'aasha ka taagan.
Dahabka Dahabka ah ee Dahabka ah ee Dahabka ah ee '2.0'
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Reviews » Waxaan falanqeyneynaa qalabka dhegaha ee 'Gold Goldless Wireless Stereo Headset' 2.0 [DIB U EEGID]
Waad salaaman tahay wanaagsan, maanta waxaan helay dhagaha dhagaha mana garanayo sida loogu xiro waxaan u isticmaalayaa fiilada Jack maxaa yeelay ma aqaano sida ay tahay wireless-ka hadii aad i caawin karto fadlan….
Wanaagsan, wali aniga iima shaqeyso, ma aqaano in koofiyaduhu aysan helin aaladda ku xiran baalashka, way birqayaan iyada oo lala soconayo mashiinka fog laakiin kuma xirna …. Laakiin barnaamijku wuu aqoonsan yahay iyaga laakiin maahan oo wax walba aniga ayuu saarayaa laakiin lagama maqlo dhagaha dhagaha ...
Waan ka xumahay haddii ay wax badan dhibtay ...
Samsung Galaxy C7 Pro cusub ayaa si rasmi ah loo bilaabay
Apple wuxuu bilaabayaa soo saarida maqaalkeeda maqalka ah